Sanitized Private Apt ★ Iphangalele, uMbindi & Khusela - I-Airbnb
Sanitized Private Apt ★ Iphangalele, uMbindi & Khusela
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguArjun
Ndihlala, ndijonge phambili ekubambeni abantu abakhulu, ukuya eCalcutta kwaye ndijonge ukwenza amava ondwendwe ngalunye lube lodwa kwaye lunika umdla. Qhagamshelana, ukubona ukuba singakwazi ukwenza isivumelwano sohlahlo lwabiwo-mali lwakho.
Izibonelelo ezongezelelweyo ezingundoqo kukuhlala (umgama ukuya kwiimarike ezinkulu, iindawo zokutyela, iindawo ezithengisa ukutya okukhawulezayo, iivenkile ezinkulu, unxunguphalo lwezonyango, ii-ATM, ezothutho, njl.njl.) nokufikelela ngokulula koohola bendlela abakhulu kunye noqhagamshelo olululo kwizithili zoshishino ezikumbindi. Ilungele abafuduki, iintsapho, izibini kunye nabahambi beshishini.
I-1200 sq.ft enokungenisa umoya kakuhle, enefenitshala, enamagumbi amabini okulala abanzi, amagumbi okuhlambela (enye encanyathiselwe enye eqhelekileyo), indawo yokuhlala eyahlukileyo kunye negumbi lokutyela kunye nekhitshi langoku, kumbindi wesixeko.
Ipropathi enesango iza nendawo yokupaka yabucala kwaye iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kwi-elevator kunye neendawo zokuhlala ezikhuselekileyo nezikhuselekileyo ezinokhuseleko lwewotshi kunye ne-24 * 7 indawo yokuxhasa amandla.
4.96 · Izimvo eziyi-251
Indawo yokuhlala ibekwe ngokufanelekileyo kwindlela yabucala kwindawo yaseGariahat; umgama omde ukusuka kwindawo ekunqumla kuyo engundoqo-kodwa kude ne-hubbub (okwaneleyo ukubaleka i-traffic). Luxolo, luluncedo, luhlala uluntu uninzi lwabahlali kunye nabaphambukeli.
Ukuhamba ngemizuzu emihlanu kukuthatha ukuya kumachibi aseRabindra Sarover- kufuneka uhambe kwiimbaleki kunye nokuvuka kwangoko. Kukho iindawo zokutyela ezahlukeneyo, iibha zekofu, eyona ndawo incinci yeti-venkile uya kuyithanda ngokupheleleyo (uNksk. Magpie's & Dolly's - kufuneka undwendwele), ivenkile enkulu-iSpencer's kunye ne-Arambagh's eya kukhathalela zonke iimfuno zakho zegrosari, iivenkile ezinomdla. njengoFabindia kunye noByloom bathengisa ezona zizwe zibalaseleyo zamaIndiya & nokunye okuninzi - konke ezantsi esitratweni okanye umgama omfutshane.
Ngaphandle kwendawo esembindini ukusuka kwiindawo ezininzi zesixeko, indawo ebumelwaneni idume kakhulu phakathi kwabathengi befestile kwaye yaziwa ngokuba ziindawo zokutyela zabucala kunye nemivalo. Zininzi iindawo zokutyela ezikhawulezayo kunye neenketho zokuthatha / zokuhambisa kwindawo ekufutshane.
Ungahlehlisa iindlela ezinomdla kunye neendlela ezijikelezayo, ukufumana imvakalelo yenkcubeko yasekhaya kunye nesixeko.
Siya kukwamkela ngokobuqu ukuba uqiniseke ukuba ukhululekile kunye nefulethi kunye nommelwane. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokuthutha kunye nokubona indawo, nceda usibhalele okanye usibize ngaphambi kokufika kwakho. Ukufika kwasebusuku ngenqwelo moya zamazwe ngamazwe, siya kukunceda ukuba ungene kwaye ube nomgcini oza kukunceda ngomthwalo wakho ukuba uyafuneka.
Ngamanye amaxesha, sinokukuthathela indawo yokungena kwangethuba, kangangokuba ayiphazamisani nokuphuma kweendwendwe. Unokusibona kwangethuba, ukuba kunokwenzeka.
Nantoni na ke celani, niya kwamkela. Musa ukuyihlisa yonke into. Ndiyavuya ukuba ubambe amatheko amancinci kwaye ube nexesha elimnandi- ukuba nje indawo ishiywe ngendlela oyifumene ngayo
#Ungaqalisa incoko nathi apha: arjun.dasgupta87@gmail.com
Siya kukwamkela ngokobuqu ukuba uqiniseke ukuba ukhululekile kunye nefulethi kunye nommelwane. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokuthutha kunye nokubona indawo, nceda usibha…